ဘာနေရဲ့ အတွေးလေးများ: December 2009
၇။ ကြေကွဲခြင်း အပိုင်းအစ အနည်းငယ်
လူသားနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကြေကွဲခြင်းသည် နှလုံးသာကို ဗဟိုပြုပြီး ဖြစ်ပွားသော စိတ်ဒဏ်တစ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို ဆိုချင်တယ်ဗျာ နှလုံးသားကြေကွဲရာမှာ အမျိုးမျိုးရှိတတ်ပါတယ် တစ်ချို့က ချစ်သူနှင့်ပတ်သက်၍ . တစ်ချို့က မိသားစုနှင့်ပတ်သက်၍ . တစ်ချို့က ကိုယ်ကိုယ်တိုင်နှင့်ပတ်သက်၍. အဖုံဖုံပေါ့ ..........
Posted by ဘာနေ ... at 9:20 AM
မိတ်ဆွေသည် ချောက်ကပ်ခြင်းတွေကို စိုပြေစေသည် လေလွင့်ခြင်းတွေကို တည်ငြိမ်စေသည် မသည်းကွဲတဲ့ အမြင်တွေကို ကြည်လင်စေသည် ဘယ်လိုမှမျှော်လင့်မထားတာတွေကို သူတို့က ဆောင်ယူပေးတယ်.............. မိတ် ဆိုတာ ဧည့်သည်ကိုဆိုတာဖြစ်မည် ဆွေဆိုတာက ဆွေမျိုးကို ဆိုချင်တာဖြစ်မည် စကားလုံးတွေသည် အလိုလိုဖြစ်လာတာမဟုတ် အကြောင်းအချက်ကို ဦးတည်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်
Posted by ဘာနေ ... at 2:53 PM
၅။ သံဝေဂ အနည်းငယ်
ချစ်တယ်. ခင်တယ် . မုန်းတယ် .. မြတ်နိုးတယ် . တွယ်တာတယ် . လုပ်ဆောင်တယ် . ကြီးပြင်းကြတယ် . နာကြတယ် .. အိုကြတယ် .. နောက်ဆုံးသေဆုံးကြတယ် ... ဒါတွေဟာ လူ့ဘ၀မှာဖြစ်ပေါ်နေကြတာပါ .
ဒါတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သံဝေဂဆိုတာဘာလဲ လို့မေးမယ် ဆိုရင် . သံဝေဂဆိုတာ.........
Posted by ဘာနေ ... at 6:12 PM